Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमा क्षेत्र गाजामा चार वर्षयताकै ठूलो हिंसा – Emountain TV
इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमा क्षेत्र गाजामा चार वर्षयताकै ठूलो हिंसा
काठमाडौं, १ जेठ । इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको झडपमा परी ५५ जना प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको छ ।
इजरायलको जेरुसेलममा अमेरिकी दूतावास खोलेको विरोधमा प्यालेस्टिनी नागरिकले सीमा क्षेत्र गाजामा गरेको प्रदर्शनमा इजरायली सेनाले हमला गर्दा ५५ जना प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको हो । प्यालेस्टिनी अधिकारीका अनुसार झडपमा परी २ हजार ७ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । गाजाका विभिन्न १३ स्थानमा करिब ४० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी समर्थकहरु प्रदर्शनमा सामेल भएको इजरायलले दाबी गरेको छ ।
प्यालेस्टिनी आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा प्रहार गरेपछि आफ्नो सेनाले अश्रु ग्यास र स्निपरमार्फत गोली प्रहार गरेको इजरायलले बताएको छ । गाजा क्षेत्रमा सन् २०१४ देखि भएका अन्दोलनका घटनामध्ये यसपटक सबैभन्दा बढी मानवीय क्षती भएको हो । अमेरिकाले घटनाको जिम्मेवारी प्यालेस्टिनी समूह हमासले लिनुपर्ने तथा हमासले जानी बुझिकनै प्यालेस्टिनीहरुलाई इजरायलको विरुद्धमा खडा हुन उत्तेजित बनाएको आरोप लगाएको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले थप क्षति हुन नदिन दुवै देशलाई संयमता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
युरोपियन युनियन, कुवेत, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, टर्की, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्न र शान्तिपूर्ण तवरबाट समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजामा मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भएको बताएको छ । प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले घटनालाई एउटा नरसंहारको संज्ञा दिएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोनले प्रदर्शनकारीमाथि इजरायली सशस्त्र फौजबाट गरिएको हिंसाको भत्र्सना गरेका छन् ।
बेलायतले भने आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न पाउने इजरायलको अधिकार भएको भन्दै उच्च संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्यालेष्टिनीको व्यापक विरोधका वावजुद अमेरिकाले आफ्नो राजदूतावासलाई तेल अबिबबाट जेरूसेलममा सारेको छ ।